Kharashka Qodobka Dheeriga ah, Nalalka Tamarta iyo Nalalka
Home > Tamarta kaydinta iyo tayada > Nalalka LED iyo Nalalka
Nalalka LED waxay kaa badbaadin karaan 80% korontadaada.
Noockayaga iftiinka LEDiyo Nalalka LED waxay la yimaadaan shuruudaha sanadka 2 ama 3. Nolosha nalalka tamarta nalalka badbaadinta waxay noqon kartaa saacadaha 50,000 ama kudhowaad sanadaha 20 haddii loo isticmaalo saacadaha 6-7 habeenkii.
Dayactirka yaryar ayaa si fiican loogu talagalay meelaha leh saqafyada sare ee qalabka loo baahan yahay si loo beddelo nalalka
Noocyo badan oo fiilooyin ah - waxaan ku siin karnaa nalalka LED si ay ugu haboonaadaan nidaamyada iftiinka ee hadda jira
Iftiin tayo wanaagsan leh
Fursadaha la kala qaadi karo ayaa la heli karaa
Range of lumen soo saarka si loo hagaajiyo heerarka iftiinka iyo fursadaha midabka iftiin cad cad ama diiran.
Waa maxay iftiinka LED-ga?
Nalalka LED waxay bixiyaan nalka tamarta yar ee gurigaaga. Nalalka waxay leeyihiin nolol aad u dheer waxayna kudhow yihiin waqtiyada 10 oo ka raqiisan nalalka laydhka ah iyo qiyaastii kala badhka kharashka nalalka qalabka nalalka.
Sidee loo helaa qiiqa saxda ah ee kuu habboon
Waxaad ka iibsan kartaa shinbirahaaga naga soo socda dukaanka online. Waxaan leenahay nalalka isbeddelka caadiga ah sida nalalka haloga yar, nalalka shumaca, nalalka bannaanka iyo bedelka tube.
Na soo wac 0800 0 246 234 si aan lagula socodsiin waajibaad lagama maarmaanka ah si aad u ogaato waxa ugu habboon ee baahidaada ku haboon.